Isku aadka Koobka General Daa’uud oo la sameeyay… (Kulamadee ayaa ugu xiiso badan?) – Gool FM
Isku aadka Koobka General Daa’uud oo la sameeyay… (Kulamadee ayaa ugu xiiso badan?)
(Milano) 10 Okt 2019. Waxaa maanta magaalada muqdisho lagu sameeyay isku aadka Koobka General Daa’uud 2019/2020, xilli sannadkan la rajeynayo inuuu noqon doono mid aad u xiiso badan.
Sida caadiga ah waxaa tartankan ka qeyb galaya ilaa iyo 16 kooxood ee isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad, iyadoo koobka kooxdan difaacaneysa ay tahay Mogadishu City Club, kaddib markii ay sannadkii lasoo dhaafay kaga guuleysatay naadiga Horseed.
Kooxda kubadda cagta Jeenyo ayaa ah kooxda inta ugu badan ku guuleysatay Koobka General Daa’uud, waxayna soo qaaday 7 jeer oo horey.
Madasha lagu sameeyay isku aadka Koobka General Daa’uud 2019/2020, waxaa ku sugnaa gudoomiyaasha kooxaha, macalimiinta, xiriirka kubadda cagta Somaaliya, iyo marti sharaf kale ee lagu casuumay munaasabadan.
Haddaba muuqaalka hoose kaga boggo Isku aadka Koobka General Daa’uud 2019/2020 oo dhammaystiran: